आइजीपी « रिपोर्टर्स नेपाल
आइजीपी नियुक्तिविरुद्ध पोखरेल र थापा अदालत जालान् ?
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा धीरज प्रताप सिंहको नियुक्तिसँग एआइजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले गम्भीर असहमति जनाएको बुझिएको छ । उनीहरुले अदालतमा
धीरज प्रताप सिंह आइजीपीमा बढुवा हुँदै
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल प्रहरीमा धीरज प्रताप सिंहलाई आइजीपीमा बढुवा गरिने बुझिएको छ । आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री १९ वैशाखबाट अवकाश पाउने भएपछि सरकारले आज आइजीपी बढुवा गर्न लागेको
धीरजप्रताप सिंहलाई आइजीपी बनाउन बाटो खुलाइएको हो ?
काठमाडौं, १७ चैत्र । नेपाल प्रहरीमा भावी आइजीपीको दौड रोचक बनेको छ । आज मन्त्रिपरिषदले डिआइजीहरुमध्येबाट धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआइजीमा बढुवाको निर्णय गरेपछि आइजीपीको दौडमा चारजना देखिएका छन्
को बन्ला वैशाखमा आइजीपी ?
काठमाडौं, २ चैत्र । नेपाल प्रहरीको एआइजीमा तीन डिआइजी बढुवामा सिफारिश भएलगत्तै भावी आइपीको दौड रोचक देखिएको छ । बढुवा सिफारिश भएकामध्ये दुईजना डिआइजी पनि आइजीपीको दौडमा देखिएका छन् ।
देउवाले आइजीपी चलाउलान् ?
काठमाडौं, १८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०७४ सालमा आइजीपी प्रकरणमा विवादमा परे । उनले तत्कालीन डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन खोज्दा पहिलो नम्बरका तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले प्रश्न उठाए
‘आइजीपी बन्न’ सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारी ‘भारतीय दूतावास छिरेको’ खुलासा
काठमाडौं, १९ असोज । नेपाल प्रहरीको २६औं आइजीपी नियुक्ति सबैभन्दा विवादास्पद भएको थियो । त्यतिबेला डिआइजीबाट सिधै आइजीपी नियुक्त भएका थिए । प्रतिष्पर्धामा ४ जना थिए । डिआइजी बढुवा हुँदा
आइजीपीका लागि शैलेश थापाको नाम गृहद्वारा सिफारिश, मन्त्रिपरिषदले आजै निर्णय गर्ने
काठमाडौं, २३ असार । नेपाल प्रहरीले आज नयाँ आइजीपी पाउने भएको छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ आइजीपी नियुक्त गर्ने भएको हो । कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा मुल्यांकन गरी
नेपाल प्रहरीको २८ औं आइजीपी को ?
काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल प्रहरीमा २८ औं महानिरीक्षकको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले २५ असारबाट अवकाश पाउने भएकाले डेढ महिनाअघिबाट आकांक्षीहरुको शक्तिकेन्द्रहरुसँग भेटघाटका
भावी आइजीपीमा थापा र पालबीच प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित
काठमाडौं, १५ फागुन । नेपाल प्रहरीको एआइजीमा तीन डिआइजीको नाम सिफारिश भएको छ । सिफारिशमा परेका नाममा तारिणप्रसाद लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल छन् ।उनीहरुको नाम गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा
असारमा आइजीपी सुनिश्चित गर्न पाँच डिआइजीबीच एआइजी बन्ने दौड
काठमाडौँ, ९ फागुन । अब नेपाल प्रहरीभित्र फेरि डिआइजीबाट सिधै आइजीपीको फूली लगाउने भाग्यमानी नहुने भएका छन् । नेपालमा प्रहरीका तीनजना आइजीपी सिधै डिआइजीबाट नियुक्त भए् । २५ औं आइजीपी
आइजीपी ज्ञवालीले कर्मचारी प्रशासनमा एसपी फेरे
काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाल प्रहरीका आइजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी फेरेका छन् । चन्द्रकुवेर खापुङको ठाउँमा उनले जर्नादन जिसीलाई ल्याएका छन् । खापुङलाई विशेष ब्युरोमा खटाएका छन्
आइजीपी ज्ञवालीलाई नायक बन्ने अवसर
काठमाडौं, ६ फागुन । २०६२/६३ सालपछि नेपाल प्रहरीमा ठूलो परिवर्तन भएको छ, केही सकारात्मक अनि केही नकारात्मक । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा प्रहरीमा व्यापक सुधार देखिएको छ, विगतमा प्रहरीकै मिलेमतोमा खुलेआम ठूला
के हो वामदेव पार्टीबाट निश्काषित फण्डा
काठमाडौं, १९ असार । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गर्ने युवराज सफलले
काठमाडौं, १९ असार । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ग्यालेक्सी स्पेसियालिटि क्लिनिक प्रा.लिसँग सम्झौता गरेको छ